Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, January 24, 2011 Monday, January 24, 2011 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဟင်းချက်ရင်ကြက်သွန်အနီနဲ့အဖြူကို မပါမပြီး ထည့်သွင်း စားသောက် တတ်ကြပါတယ်.. ဒါဟာ ဟင်းတွေကို အညှီအဟောက် အနံ့မျိုး မထွက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်.. ကြက်သွန်နီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ အနည်းငယ်ပြောရရင် ကြက်သွန်နီကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀၀ လောက်ကတည်းက ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြတယ်လို့ သမိုင်းအထောက်အထားများ အရ သိရှိရပါတယ်.. ကြက်သွန်ရဲ့ မူလ စတင်တွေ့ရှိရာအရပ်ဟာ အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်းဒေသဖြစ်ပါတယ်.. ကြက်သွန်နီကို ကြာရှည်ခံအောင် သိုလှောင် သိမ်းဆည်းထားချင်သူများ အညှောင့်ပေါက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကြက်သွန်ရဲ့ အမြစ်ငယ်တွေကို မီးရှို့ပြီး သိမ်းဆည်းထားကြလေ့ ရှိပါတယ်..
ကြက်သွန်မှာ ပန်းသီးတစ်လုံးထက် ပိုပြီး သကြားဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိပါတယ်.. ဗီတာမင် B6, B1 နဲ့ B9 တို့နဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ် လည်း များပြားစွာပါဝင်ပါတယ်.. ကြက်သွန်နီကို အခွံမခွာခင် ရေခဲသေတ္တာ အတွင်းသော်လည်းကောင်း ရေအေးတွင် စိမ်ခြင်းအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း မိနစ် ၃၀ခန့် ထားပြီးမှ အခွံခွာရင် ကြက်သွန်ငွေ့ကြောင့် မျက်ရည်ကျခြင်းမှ သက်သာရာရနိုင်ပါတယ်.. ကြက်သွန်နီမှာ ဆာလ်ဖာ ကွန်ပေါင်းများ ပေါများစွာ ပါရှိခြင်းကြောင့် မှတ်ဥာဏ်အား ကောင်းစေတယ်လို့ သိရပါတယ်.. သို့သော် အကျက်လွန်အောင် ချက်ထားသော ကြက်သွန်နီမှာ မူလပါဝင်သော ဓာတ်ပေါင်းများ ပျက်စီးသွား စေနိုင်သောကြောင့် ကြက်သွန်နီကို အစိမ်း သော်လည်းကောင်း၊ မကျက်တကျက် ချက်ပြီး စားသုံးခြင်းတို့ကသာ ပိုပြီး အစွမ်းထက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
ကြက်သွန်နီကို ဟိုးရှေးခေတ်ကတည်းက ရောဂါဘယတွေကို ကုသပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်.. မကောင်းဆိုးဝါးတို့ရဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်.. အချို့သော ကျေးလက် တောရွာတွေမှာ နေအိမ်ထဲမှာ ကြက်သွန်နီတွေ ချိတ်ဆွဲထားရင် မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ ရောဂါဘယတွေ မ၀င်ရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်.. ဖျားနေတဲ့ လူနာအနီးမှာ ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး ထားရင် အဖျားရောဂါ သက်သာတယ် လို့လည်း ယုံကြည်ကြပါတယ်.. ကြက်သွန်နီဟာ အနံ့အသက်တွေကို စုတ်ယူနိုင်စွမ်းအား မြင့်မားတာကြောင့် အခွံခွာပြီး ချက်ခြင်း မသုံးဖြစ်တဲ့ ကြက်သွန်နီကို နောက်နေ့မှ ပြန်သုံးတာမျိုး မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုကြပါတယ်..
အသုံးဝင်မှု များပြားလှတဲ့ ကြက်သွန်နီကို နိုင်ငံတိုင်းမှာ တန်ဖိုးထားသုံးစွဲကြသလို အချို့သောနိုင်ငံများမှာ ကြက်သွန်နီ ပွဲတော်ကို သီးသန့် ရက်များသတ်မှတ်ပြီး ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်.. ကြက်သွန်နီဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ရုံသာမက ချစ်စရာလည်း ကောင်းလှပါတယ်.. မယုံဘူးဆိုရင် ကြက်သွန်နီပွဲတော်က ချစ်စရာ ကြက်သွန်နီပုံ အမျိုးမျိုးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်နဲ့ ပန်းပွင့်သုပ်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, January 23, 2011 Sunday, January 23, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့တော့ အစားအသောက် ကဏ္ဍအတွက် ခုလိုဆောင်းရာသီမှသာ စားနိုင်တဲ့ ရာသီစာ စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။
ပထမဦးဆုံး စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်ဖို့အတွက် အသားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အသီးအရွက်တွေကို ပြင်ဆင်ပါမယ်.. အသားနဲ့ မကြော်လိုသူများ အသီးအရွက်တွေချည်း သပ်သပ်လွတ်လည်း ကြော်နိုင်ပါတယ်။
ပုံထဲမှာတော့ စတော်ဘယ်ရီထမင်းကြော်ဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အသီးအနှံတွေပါ။ ကြက်သား၊ ၀က်သား ကြိုက်ရာသုံးနိုင်သလို ဒီမှာတော့ ကြက်အူချောင်းကိုသာ သုံးထားပါတယ်.. အသီးအရွက် တွေကတော့ မှို၊ ဘရိုကိုလီ (ပန်းမုန်လာစိမ်း) ၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ပြောင်းဖူး၊ ပဲသီး၊ ငရုပ်ပွစိမ်း၊ ဥနီ၊ အညိုရောင်ကတော့ ရေညှိဖြစ်ပါတယ်.. မရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် မထည့်ဘဲလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အသီးအနှံကိုလည်း မိမိမှာ ရှိတဲ့ အသီးအနှံလေးတွေ နှစ်သက်သလို ထည့်နိုင်ပါတယ်.. ကြက်ဥထည့်ချင်ရင် ကြက်ဥ ၂လုံးလောက်ကို ဖောက်ပြီး ခွက်တစ်ခုထဲ ခလောက်လို့ အရင်ကြော်ထားပြီး ကြက်ဥကြော်ကို ပါးပါးလှီးထားပါတယ်.
ထမင်းကိုတော့ မကြော်ခင်မှာ ချေမွပြီး ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်တို့နဲ့ နယ်ထားပါတယ်..
ပထမဦးဆုံး အသားပြားတွေကို အရင်ကြော်ပါတယ်.. ၀က်သား၊ ကြက်သားနဲ့ ကြော်မယ်ဆိုရင်လည်း အသားကို အရင်ကြော်ပါတယ်.. ကျက်ရင်ဆယ်ထားပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းတို့ကို အရင်ထည့် အသီးအရွက်ထည့် ကြော်ပါတယ်.. အသားကို ပြန်ထည့်ကြော်ပါတယ်..
ပြီးတော့မှ အစောက ကြော်ပြီး ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်ဥကိုထည့်ကြော်ပါတယ်.. ပြီးတော့ နယ်ထားတဲ့ ထမင်းတွေကို ထည့်ပြီး ကြော်ပါတယ်.. ငရုပ်ကောင်းလေး နည်းနည်းထည့်ပါတယ်.. အနံ့လေး မွှေးနေအောင်ပါ။
ထမင်းထည့်ပြီးကြော်လို့ အပေါ့အငံမြည်းလို့ လိုတာထပ်ထည့်ပြီး မီးပေါ်က ချကာနီးမှာ မထူမပါး လှီးထားတဲ့ စတော်ဘယ်ရီတွေကို ထည့်မွှေပြီး ချလိုက်ပါတယ်.. ချပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်းစားမှ စတော်ဘယ်ရီလေးတွေ အရည်မပျော်ဘဲ ရှိနေမှာပါ။ ချကာနီးမှ မထည့်ဘဲ အစောကတည်းက ထည့်ရင် မီးတအားပြင်းပြင်းနဲ့ဆို အသီးတွေ အရည်ပျော်ကုန်ပါလိမ့်မယ်..
ထုံးစံအတိုင်း ထမင်းကြော်ကို အလှဆင်ထားပါတယ်. ထမင်းကြော်ကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ဖိထည့် လက်နဲ့ အသာသိပ်ပြီး ပန်းကန်ပြားပေါ် မှောက်ချလိုက်ပါတယ်.. ခုလို ခပ်လုံးလုံးလေး ဖြစ်အောင် ပေါ့နော်.. ပြီးတော့ ဥနီနဲ့ သခွားသီးနဲ့ အလှဆင်ပါတယ်။ ကြက်ဥကို မမဲအောင်၊ မညိုအောင် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေး ကြော်ပြီး ဘေးနားမှာ နေရာချပါတယ်.. သီးသန့်ချန်ထားတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေကို ခုလို ပါးပါးလှီးပြီး ထမင်းကြော်အပေါ်မှာ အလှဆင်လိုက်ပါတယ်.. ဒါဆို စတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့ အခြားအသီးအနှံတွေ ပါဝင်တဲ့ စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်ရပါတယ်..
ကြက်ဥကို မညိုသွားအောင်၊ အနားတွေ မတူးအောင်၊ မကျက်တကျက် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖြစ်အောင် ကြော်နည်းကတော့ ဆီကိုပူအောင်တည်ပြီးတာနဲ့ နည်းနည်း အအေးပြန်ခံပါတယ်.. ပြီးတော့မှ ကြက်ဥကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်.. ဆီအေးနေရင် မီး မျှဉ်းမျှဉ်းလေးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းအပူပေးပါ။ ပူနေသေးရင်တော့ မီးခလုပ် မဖွင့်တော့ဘဲ သူ့အပူချိန်လေးနဲ့သူ ဖြေးဖြေး ထားလိုက်ရင် ကြက်ဥဟာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ လှလှလေး ကျက်သွားပါမယ်..
စတော်ဘယ်ရီထမင်းကြော်လိုဘဲ နာနတ်သီး ထမင်းကြော်ကိုလည်း ကြော်စားနိုင်ပါတယ်.
နာနတ်သီးပေါ်ချိန်တုန်းက ကြော်စားခဲ့တဲ့ နာနတ်သီး ထမင်းကြော်ပါ။ အဲဒီတုန်းက မတင်ဖြစ်ဘဲ ခုမှပေါင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. အပေါ်မှာ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်လေးတွေ ဖြူးထားပါတယ်.. ပြီးတော့ အဲဒီချိန်တုန်းက ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်မိပေမဲ့ လှတပတ မပြင်လိုက်ရပါဘူး.. ဖြစ်သလိုပေါ့နော်။ နာနတ်သီး ထမင်းကြော်ဟာ ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ အရသာ တစ်မူထူးပြီး စားလို့ ကောင်းပါတယ်။။
နောက်ထပ် ဟင်းတစ်မျိုးက ပန်းပွင့်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ပန်းမုံလာ( မုန်လာပန်းပွင့်) သုပ်ဖြစ်ပါတယ်.. ပန်းပွင့်သုပ်ဖို့ မုန်လာပန်းတွေကို အနေတော်အရွယ်လေးတွေ ဖဲ့ထားပါတယ်..
ပန်းပွင့်တွေကို ရေနွေးဆူဆူနဲ့ ပြုတ်ပါတယ်.. ကြာကြာ မပြုတ်ဘဲ မပျော့ခင်မှာ ဆယ်ယူပြီး ရေအေးနဲ့ စိမ်လိုက်ပါတယ်.. ပျော့သွားရင် စားမကောင်းပါ။ ခပ်မာမာ အနေအထားမှာ ဆယ်ယူပါ။
ရေအေးနဲ့စိမ်ထားတဲ့ ပန်းပွင့်ကို ရေစစ်ပြီး ဥနီ၊ သခွားသီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ နံနံ တို့ကို ထည့်ပါတယ်..
နှမ်း၊ မြေပဲထောင်း၊ ပဲမှုန့်၊ ဆီကျက်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့် ( ဟင်းခတ်မှုန့်)၊ ပဲငံပြာရည်၊ သံပုရာသီး၊ နှမ်းဆီ( ရှိလျှင်) အနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်.. အဆာပလာစုံလျှင် နယ်လို့ ရပါပြီ။
ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ပန်းပွင့်ခေါ် ပန်းမုန်လာသုပ်ပါ
စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်နဲ့ ပန်းပွင့်သုပ်က ဒီတစ်ပတ် Sunday Special ပါ။ နောက်အပတ် အစားအသောက် ကဏ္ဍမှာ အခြား ဟင်းလေးတွေနဲ့ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ကြပါဦးစို့နော်.။
ပိတ်ရက်မှာ စားကောင်းသောက်ဖွယ်များဖြင့် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, January 19, 2011 Wednesday, January 19, 2011 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်၍ ခပ်ဟောင်းဟောင်း တိုက်အိုလေးတစ်ခု၏ရှေ့ သစ်ပင်ရိပ် မြေကွက်လပ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် ၁၀နှစ် အရွယ် ဂျွန်နှင့် ဆမ် ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ဆော့ကစားနေကြသည်။ သူတို့နှင့် မလှမ်း မကမ်းတွင်တော့ ကလေးတို့၏ မိခင် မေရီက တံမြက်စည်းလှည်းရင်း နေအိမ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေသည်။ ပူပြင်းသော နေရောင်ကြောင့် မိခင်၏မျက်နှာတွင် ချွေးဥတို့က ယိုစီးကျလျှက်. ခပ်နွမ်းနွမ်း အင်္ကျီမှာလည်း နောက်ကျောတွင် ချွေးများ စိုရွဲလို့ နေခဲ့သည်။ ထိုစဉ် တိုက်ခန်းရှေ့သို့ တောက်ပ ပြောင်လက်နေသော ဇိမ်ခံကားကြီးတစ်စီးက ထိုးရပ်လာပြီး ကားပေါ်မှ ၀တ်ကောင်းစားလှများဖြင့် သပ်ရပ် ကြော့ရှင်းနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆင်းလာသည်။ ကလေးတို့၏ မိခင် မေရီက အမျိုသမီးကို နှုတ်ဆက်စကားဖြင့် ဆီးကြိုသည်။ ကားရပ်လိုက်ကတည်းက ကစားခြင်းကို ရပ်လိုက်ကာ စောင့်ကြည့်နေသော ကလေး နှစ်ယောက်မှာ သူတို့၏ မိခင်နှင့် စကားပြောနေသော အမျိုးသမီးကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေမိကြသည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် အိမ်သို့ မကြာခဏ လာလည်တတ်သော မေမေ့သူငယ်ချင်း အန်တီရှယ်လီ ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ် အစ်ကိုဖြစ်သူ ဂျွန်က “ ဆမ်.. အန်တီ ရှယ်လီ့ကားကြီးက အကောင်းစားကြီးနော်.. စီးကြည့်ချင်လိုက်တာ ငါတို့ဘ၀မှာ ဒီလိုကားမျိုး တစ်ခါမှ မစီးဖူးဘူး.. အန်တီရှယ်လီကလည်း ချောလိုက်တာ.. အ၀တ်အစားတွေကလည်း အကောင်းစားတွေ.. ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. ငါတို့မေမေကို ကြည့်ပါဦး.. ၀တ်ထားတဲ့ အင်္ကျီက ဟောင်းလို့၊ ရုပ်ကလည်း ဟိုအန်တီ့လိုလဲ မချောဘူး.. ပြီးတော့ ငါတို့မေမေမှာ ကားလည်း မရှိဘူး.. ပိုက်ဆံလည်း အများကြီး မရှိဘူး။ အန်တီရှယ်လီကို ကြည့်ရတာ ပိုက်ဆံတွေလည်း အများကြီး ရှိမှာနော်.. သူသာ ငါတို့မေမေ ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ” ဟု ပြောလိုက်တော့ “ ဟုတ်တယ်နော် ကိုကို ကားလည်းရှိ ပိုက်ဆံလည်း ချမ်းသာတဲ့ အန်တီရှယ်လီကို ဆမ်လည်း မေမေတော်ချင်တယ်..” ဟု ပြန်ပြောလေသည်။
ကလေးနှစ်ယောက် ပြောနေသည်ကို မေရီနဲ့ ကားပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးတို့က မကြားလိုက်ကြပါ.. နှစ်ယောက်သား စကားပြောကြရင်း တိုက်အိမ်အိုလေးထဲသို့ ၀င်သွားကြလေသည်။ ကလေးနှစ်ယောက်မှာ ဆက်ပြီး ကစားနေကြသော်လည်း စိတ်ပါလက်ပါ မရှိကြတော့.. သူတို့ အာရုံက ကားကောင်းကြီးနှင့် ရောက်လာသော ၀တ်ကောင်းစားလှနှင့် ရှယ်လီ့ထံသို့ ရောက်နေလေသည်။ အငယ်ဖြစ်သူ ဆမ် “ကိုကို အန်တီရှယ်လီ ဘာလာလုပ်လဲ သွားကြည့်ရအောင်…. ဆမ်တို့လည်း အိမ်ထဲ ၀င်ကြစို့” ဟု ပြောလိုက်ရာ ဂျွန်ကလည်း ထရပ်လိုက်ပြီး နှစ်ဦးသား တိုက်အိမ်လေးထဲသို့ ၀င်လာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် သူတို့၏ မိခင်နှင့် ဧည့်သည်အမျိုးသမီးတို့ ထိုင်နေသော ဧည့်ခန်းရှိ သစ်သားဆက်တီ ခပ်ဟောင်းဟောင်းလေးနားတွင် မယောင်မလည်နှင့် သွားရပ်နေကြရင်း ၄င်းတို့၏ ပြောစကားများကို နားထောင်ကြသည်။
ရှယ်လီက သူတို့အိမ်အကြောင်း၊ နံမည်ကြီးကျောင်းတွင်ထားသော သူ၏သားသမီးများ အကြောင်း၊ မကြာခင်က ၀ယ်လိုက်သော ရေခဲသေတ္တာကြီးအကြောင်း၊ အိမ်တွင်မွေးထားသော ခွေးများက အမဲသားနှင့် နို့ တစ်ရက်ကို ဘယ်နှစ်ပေါင် စားကြောင်း၊ အိမ်တွင်ကားဘယ်နှစ်စီး ထပ်ဝယ်ထားကြောင်း စသည်စသည် များပြားလှသော အကြောင်းအရာများကို ဟန်နှင့်ပန်နှင့် ရေပက်မ၀င်အောင် ပြောနေလေသည်။ သူတို့မိခင်ကတော့ တစ်ချက်တစ်ချက် “အင်း..” “ဟုတ်လား” စသည် စကားထောက် ၀င်ပြောခြင်း ကလွဲလို့ တစ်ခြားဘာမှ မပြောပါ။ ငြိမ်ပြီး နားထောင်နေသည်က များလေသည်။ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ ရှယ်လီပြောသမျှကို အံ့သြစိတ်ဝင်စားစွာ နားထောင်နေရင်း သူတို့၏ စိတ်ထဲတွင် ရှယ်လီ့ကို အထင်ကြီးစိတ်များ၊ ရှယ်လီတို့၏ အိမ်ကြီးတွင် နေချင်စိတ်များ၊ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လို့ နေသည်။ ပြီးတော့လည်း သူတို့မေမေ၏ ဘာမှ ပြန်မပြောသော အနေအထားကိုလည်း စိတ်ထဲက အားမလို အားမရ ဖြစ်နေမိသည်။
ကလေးနှစ်ယောက်၏ အတွေးတွင် “မေမေဟာ ဘာလို့များ ဘာမှ ပြန်မပြောတာပါလိမ့်.. သူတို့ညီအစ်ကို အကြောင်းတွေ ပြောပြလိုက်ပါတော့လား.. သူတို့ကို မချစ်ဘူးလား.. အန်တီရှယ်လီကတော့ သူ့သားတွေ သမီးတွေ တော်တာ၊ အစားအသောက် ကောင်းကောင်း ကြိုက်တာ၊ အ၀တ်အစားဆိုလည်း ကောင်းတာမှ ၀တ်ချင်တာတွေ ပြောနေတာ ရွှန်းရွှန်းကိုဝေလို့.. မေမေကတော့ နှုတ်ပိတ်ပြီး ထိုင်နေတယ်.. မေမေ့မှာ ဘာလို့များ ဘာမှကို ပြောစရာ မရှိတာပါလိမ့်…” ဟူ၍ တွေးနေမိကြသည်။
စကားတွေ အများကြီးပြောနေသော ရှယ်လီက “ ဟယ် ခုမှ သတိရတယ်.. တို့ ဒီကိုလာရင်း လမ်းမှာ ရတနာဆိုင်တစ်ခုကို ၀င်လာခဲ့တယ်.. အဲဒီဆိုင်မှာ စိန်ထည်လေးတွေ လှတာတွေ့တာနဲ့ သံအမတ်ကြီး ဧည့်ခံပွဲမှာ ၀တ်ဖို့ ၀ယ်လာခဲ့တယ်.. မေရီ့ကို ပြရဦးမယ် သိလား” ဟု ဆိုကာ သူမ၏ လက်ကိုင်အိတ် ခပ်ကြီးကြီး အကောင်းစားကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် အထဲမှ လူကြီးလက်ဝါးသာသာအရွယ် ဗူးလေးတစ်ခုကို ထုတ်ကာ ဖွင့်လိုက်သည်။ ဗူးထဲတွင်တော့ နေ့ခင်း အလင်းရောင်အောက်တွင် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် တောက်ပနေသော စိန်ထည်လေးများက လင်းပ လက်ဖြာနေသည်။ ထိုဗူးလေးကို မေရီ့ကို ကမ်းပေးလိုက်သော မေရီက ၀တ်ကျေ တန်းကျေ တစ်ချက်တော့ ယူကြည့်ပြီး ချက်ခြင်းဘဲ ရှယ်လီ့ကို ပြန်ပေးလိုက်သည်။ ကလေးတို့၏ မိခင်ဖြစ်သူ မေရီ့မျက်လုံးများထဲတွင်မူ လှပပြိုးပြက်နေသော စိန်ထည်များပေါ်တွင် တပ်မက်မှု၊ လိုချင်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု အရိပ်အယောင်များ ရှိမနေခဲ့.. ပကတိ အဖြူထည်..
“မေရီ.. နင်က ဒီလိုစိန်ထည်တွေကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလား.. နင့်ဘ၀မှာ ဒီလို တန်ဖိုးကြီး ရတနာပစ္စည်းတွေ တစ်ခါမှ မ၀တ်ဖူးဘူး မဟုတ်လား.. တန်ဖိုးကြီးကြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ စိန်ထည်တွေကို ၀တ်ချင်တဲ့စိတ်၊ လိုချင်တဲ့စိတ် မရှိဘူးလား.. ကျောက်မျက်ရတနာ ကောင်းကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိရင် ဘယ်လောက်ဂုဏ်တက်တယ် ဆိုတာ နင်သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး မေရီ” ရှယ်လီက မေရီ့ကို ပြောလိုက်တော့ မေရီက တစ်ချက် ပြုံးလိုက်ရင်း
“ မေရီ ဒီလို စိန်တွေ၊ ရွှေတွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေကို ဒီလောက် မမက်မောပါဘူး ရှယ်လီ.. မေရီ့မှာ အဖိုးတန်ဆုံး ရတနာတွေ ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်တာတွေ မရှိလဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီ စိန်တွေဟာ မေရီ့ရဲ့ ရတနာတွေလောက် တန်ဖိုးထားစရာလဲ မရှိဘူး.. မက်မောစရာလဲ မရှိဘူး.. မေရီ့မှာ ရှိတဲ့ အဖိုးတန်ဆုံး ရတနာတွေနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်.. အဲဒီရတနာတွေကသာ မေရီ့အတွက် တန်ဖိုးထားရာ အလိုအပ်ဆုံးအရာတွေပါ”
မေရီ့စကားကို ကြားတော့ ရှယ်လီရော ကလေးနှစ်ယောက်ပါ ထူးဆန်း အံ့သြသွားခဲ့သည်။ မေရီတွင် ဘယ်လို အဖိုးတန်ရတနာတွေ ရှိနေခဲ့ပါလိမ့်… သူတို့တွေလည်း မသိလိုက်ရပါလား.. ဟူသည့် အံ့သြခြင်းတွေက သူတို့တွေ၏ မျက်နှာမှာ ယှက်ဖြာလို့ နေသည်။ ချက်ခြင်းဘဲ ရှယ့်လီထံမှ အသံထွက်လာသည်.. “ အမယ် မေရီက ရတနာတွေ ရှိတယ်ပေါ့.. တို့လဲ မသိရပါလား.. ပြောပါဦး ဘယ်လို ရတနာတွေလဲ.. ပတ္တမြားလား.. မြတွေလား” မယုံသလို၊ ခနဲ့သလို မေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သော်လည်း မေရီက ခပ်ဖွဖွလေး အပြုံးတစ်ခုနဲ့ အတူ
“ ရှယ်လီပြောတဲ့ ရတနာတွေ တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ရှယ်လီ.. မေရီ့အတွက် အဖိုးတန်ရတနာဆိုတာ မေရီရဲ့ သားလေးနှစ်ယောက်ပါ။ မေရီ သူတို့ကို ဘယ်လို ရတနာတွေနဲ့မှ မနှိုင်းယှဉ်လောက်အောင် တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်တယ်.. သူတို့ဟာ မေရီ့အတွက် အကောင်းဆုံး၊ အဖိုးတန်ဆုံး ရတနာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခြား ဘယ်လို ရတနာမျိုးမှ မေရီ့အတွက် တန်ဖိုးထားစရာ မက်မောစရာ မဖြစ်တော့ပါဘူး.. ဒီရတနာတွေနဲ့လည်း ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး။”
ခိုင်မာ တည်ကြည်သော လေသံဖြင့် ပြတ်ပြတ် သားသား ပြောလိုက်သော မေရီရဲ့ စကားသံက ဧည့်ခန်းကလေးကို တဒင်္ဂ တိတ်ဆိတ်ခြင်းများ ဖြစ်ထွန်းသွားစေခဲ့တော့သည်။
စက္ကန့် အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ဂျွန်နဲ့ ဆမ်တို့က သူတို့၏ မိခင် မေရီကို “မေမေ ” ဟု ခေါ်ကာပြေးပြီး ဖက်လိုက်ကြသည်။ သူတို့မေမေ ရင်ထဲတွင် သူတို့အပေါ် ဘယ်လောက်တောင် ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသည် ဆိုတာ ခုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလိုက်ရလေပြီ။ ကားကောင်းကြီး စီးနိုင်ပြီး ချမ်းသာသော၊ ၀တ်ကောင်းစားလှ ၀တ်နိုင်သော၊ ဟိတ်ဟန်ကြီးသော အန်တီရှယ်လီကို အမေတော်ချင်သည် ဟု အစောတုန်းက နှစ်ယောက်သား ပြောခဲ့မိသော စကားများအတွက် ရှက်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်းများ ခံစားနေရသလို သူတို့မေမေ၏ သူတို့အပေါ် ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားခြင်းကို သိလိုက်ရ၍ ၀မ်းသာကြည်နူးခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း စသည်ခံစားချက် မျိုးစုံတို့ဖြင့် သူတို့လေးတွေ၏ ပါးပြင်ပေါ်တွင် မျက်ရည်စများ လိမ့်စီးကျလာလေသည်။ မေရီက မိခင်မေတ္တာအပြည့်ဖြင့် ကလေးနှစ်ယောက်၏ ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်များကို ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်း ယုယခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ကာ တို့သုတ်ပေးနေလေတော့သည်။ ကလေးတွေကလည်း မေရီကို တင်းကြပ်စွာ ပြန်လည်ဖက်ထားလို့နေခဲ့ရာ နှုတ်မဆက်ဘဲ ဧည့်ခန်းထဲမှ တိတ်ဆိတ်စွာ ထထွက်သွားသော ရှယ်လီ့ကို သူတို့ မိသားစု ဂရုမထားမိ လိုက်ကြတော့ပေ။ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဧည့်ခန်းထဲမှာတော့ ကြွားဝါခြင်းတို့ ကင်းပသည့် ဖြူစင်မွှေးပျံ့သော မေတ္တာချစ်ခြင်း ရနံ့တို့က သင်းပျံ့လို့ နေလေခဲ့ပြီ။
သားသမီးတို့သည် မိခင်များအတွက် တန်ဖိုးအထားရဆုံး ရတနာများ ဖြစ်ကြသကဲ့သို့ သားသမီးတိုင်းသည်လည်း မိဘများအား အနှိုင်းမဲ့သော အဖိုးတန် ရတနာများအဖြစ် ပြန်လည်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားကြမည်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံး ဖြူစင်သော မေတ္တာရနံ့တို့ မွှေးမြပျံ့လွှင့်နေမည်မှာ အသေအချာပင်။
လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်လောက်က အင်တာနက်တွင် ဖတ်ခဲ့မိသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသည့် ၀တ္ထုတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ယနေ့ ပြာသိုလပြည့်နေ့တွင် ကျရောက်သော အမေများနေ့အတွက် မိခင်များအားလုံးကို ဦးညွှတ်ရင်း အမှတ်ရစွာ ပြန်လည်ခံစား ရေးဖွဲ့ပါသည်။ ရေးသူအမည်နှင့် ခေါင်းစဉ်ကို မမှတ်မိတော့သည်မို့ မဖော်ပြနိုင်တာ နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ ပန်ကြားချင်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ချစ်လှစွာသောအမေနှင့် တကွ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိခင်များအားလုံးကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာ ရှိကြပါစေရှင်။